Wasiir Hore: Isbadelku waa inuu gaaro ilaa madaxweyne Xasan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Xildhibaan C/samad Macalin Maxamuud oo horay usoo noqday wasiirkii Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qanka Soomaaliya ayaa sheegay in eedda koowaad ee amin ximadu dusha uga dhaceyso madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
“Wixii xildhibaanada ay ku eedeynayeen ayay qeyb ka yihiin wixii ka dhacay baarlamaanka, eeda ugu ballaaran cida ay ku dhaceyso waa madaxweynaha ma ahan wasiir iyo taliye”, sidaa waxaa yiri wasiirkii hore arrimaha gudaha iyo amniga C/samad Macallin Maxamuud oo la hadlay warbaahinta gudaha.
Xildhibaan C/samad ayaa tilmaamay in is casilaadii wasiirkii amniga qaranka C/kariim Xuseen Guuleed aysan waxba soo kordhin doonin, isagoo xusay in dhibaatadu ka jirto wada shaqeyn la’aan heydaha amaanka dhexdooda ah.
“Ilaa iyo hada wax is bedel oo dhacay waxaa ka aragnay wasiirkii amniga oo is casilay, waxba is bedel ma aanan arkin culeys aad u badan ayaa amniga ka jira iyo dhinaca siyaasada gudaha” ayuu yiri Xildhibaan C/samad.
Wuxuu ku taliyey xildhibaan C/samad in is bedel guud lala yimaado, isla markaana isbadelkaasi kasoo bilowdo ilaa madaxweynaha oo ay hoostagaan dhamaan taliyaasha amnig.
“Madaxweynaha asiga ah taliyaha guud ee ciidamada, taliyeyaasha laamaha amniga asiga ayay warbixin siiyaan, lama dhihi karo waxbaa is bedeli doono hadii Wasiirka baxay, laakiin waa in taliyeyaasha la bedelo, in meel walba ay taabato xataa Madaxweynaha” ayuu yiri xildhibaan C/samad.
Sabitdii ayaa Alshabaab weerar is-qarxin iyo weerar toos ah ku qaadeen baarlamaanka Soomaaliya, waxaana halkaas ku dhintay dad fara badan, inkastoo xildhibaanadu badbaadeen marka laga reebo 3 dhaawac gaaray.
Dabley Muqdisho ku toogtay muwaadin u dhashay Turkiga